यी पाँच यौन पोजिसनमा महिलाहरु धेरै आकर्षित हुन्छन् – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ आश्विन ११, शनिबार १५:२८
यौनका विषयमा नेपाली समाजले अझै पनि लुकिछिपी चासो राख्ने गरेको पाइन्छ । यौनका कुरा अलि अपच हुने हुँदा यसका विषयमा चर्चा र चासो कम देखाउने गरिन्छ ।
तर पनि लुकिछिपी सबैले यस तर्फ ध्यान दिएकै हुन्छन् । त्यसैले यौनका विषयमा खुल्लारुपमा चिन्तन कम हुने गरेको छ । संसारको सर्वोत्कृष्ट आनन्ददायक चीज यौनलाई नै मानिन्छ । त्यसैले पनि यौन सधैं चर्चाको शिखरमा रहन्छ । यौन जीवनलाई अझ आनन्दायक बनाउन यसका आसनको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ ।
त्यसैले यौन जीवनलाई सुखद बनाउन विभिन्न शैली, पोजिसन, पहिरन, बेड, स्थानजस्ता कुराको पनि विशेष ख्याल गरिन्छ । यौन साथीको भावना बुझेर यौन सम्पर्क राख्नुपर्छ । महिलालाई सबैभन्दा बढी आनन्द यौन आसन के के हुन् त्यस तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । केही यौन आसनका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
१. डग पोजिसनः डग पोजिसनमा महिलाले सबैभन्दा बढी आनन्द पाउँने हुदा यो पोजिसनमा सेक्स गर्न उनीहरू एकदमै लालायित हुने गर्छन् । यसलाई सर्वाधिक लोकप्रिय सेक्स पोजिसन पनि मानिन्छ । प्रायः महिलाले आफ्नो पुरुष साथीले यही पोजिसनमा सेक्स गरोस् भन्ने चाहना राख्छन् ।
२. काउगर्ल पोजिसनः महिलाहरूले रुचाउने अर्को प्रमुख सेक्स पोजिसन भनेको काउगर्ल पोजिसन हो । यो पोजिसनमा सेक्स गर्न रुचाउने महिलाहरूले आक्रामक सेक्स चाहान्छन् । यो पोजिसनलाई सबैभन्दा सेक्सी पोजिसन पनि भनिन्छ । यो पोजिसनमा सेक्स गर्दा पूर्णतया महिलाको नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ । यो पोजिसनमा पुरुषमाथि महिला रहेर गरिन्छ अर्थात् पुरुष तल हुन्छन् ।
३. मिसिनरी पोजिसनः यो पनि महिलाहरूले रुचाउने प्रमुख पोजिसन अन्र्तगत रहेको छ । प्रायः सबै यौनजन्य क्रियाकलाप यही पोजिसनबाट सुरु गरिने मान्यता रहेको छ । यो पोजिसनमा आँखामा आँखा जु्धाउँदा महिलाहरू बढी आकर्षित हुने गर्छन भनिन्छ ।
४. स्पुन्स पोजिसनः यो पोजिसनमा सेक्स गर्दा लामो समयसम्म यौनक्रीडामा सहभागी हुन सकिने विश्वास रहेको हँदा महिला धेरै आकर्षित भएको पाइन्छ । यो पोजिसनमा यौनसाथीहरू एक अर्काको साइडमा चम्चा खप्टिएझैं गरी सेक्स क्रियाकलाप गर्छन् ।
५. स्ट्यान्डिङ पोजिसनः यस पोजिसनमा यौनसाथीहरू दुवै जना उठेर यौन सम्पर्क गर्छन् । महिला उठेर भित्तातिर र्फकने र पुरुष पछाडि हुने यो पोजिसनबाट पनि महिलाले बढी सन्तुष्टि पाउछन् । त्यसैले यो पोजिसनमा पनि धेरै महिलाले आकर्षित हुने गर्छन् ।